डाइबिटिजदेखि दमसम्मका लागी उपयोगी दालचिनीका अनगिन्ती फाइदाहरु - ज्ञानविज्ञान
मुटु कमजोर भएका ब्यक्तिलाई महमा मिसाई नित्य केही मात्रामा सेवन गर्दा फइदा हुन्छ। डरलाग्ने, मुटु बढी ढुकढुक हुने, झस्किने लक्षणहरु उत्पन्न भएमा दूध र शिलाजितका साथमा थोरै जाइफल मिसाई प्रयोग गर्दा फइदा हुन्छ। भोक नलाग्ने भएमा केही दिन जाइफको टुक्रा चुस्नाले भोक बढी लाग्न थाल्दछ ।
खोकी र ज्वरोमा तुलसीको पात उमालेर दिएमा फाइदा हुन्छ। तुलसीले रगतमा कोलस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रित गर्छ, नियमित सेवनले वजन घटाउँछ। तुलसीको रसमा केही नुन मिसाएर बेहोस मानिसको नाकमा अलिकता राखिदिने हो भने होस चाँडै खुल्छ। चिया बनाउँदा तुलसीको केही पात पनि उमाल्ने हो भने रुघा, ज्वरो तथा शरीरको दुखाई कम हुन्छ। तुलसीको रसलाई ५ ग्राम महका साथ खाने हो भने बाडुली रोकिन्छ, दमका रोगीलाई लाभदायी हुन्छ ।
Don't Miss it व्यक्ति कमाएर होइन, बचत गरेर धनी हुन्छ-जान्नुहोस् पैसा बचत गर्ने यो मन्त्र
Up Next तपाईलाई कफी कतिकाे मनपर्छ ? कफी पिउँदा हुने केहि फाइदाहरु यास्ता छन्
घरिघरि पिसाब लागी रहन्छ ? यस्ता रोग लागेको हुन सक्छ
युरीनरी ट्य्राक्ट इन्फेक्सन: युरीनरी ट्य्राक्ट इन्फेक्सन हुँदा मूत्रथैलीमा इरिटेसन हुन थाल्छ । अनि घरिघरि पिसाब लाग्ने समस्या हुन्छ । प्रोस्टेट…
यसरी चम्काउनुहोस् गाला दाह्री काटेपछि
कहिलेकाही दाह्री फालेपछि अनुहारमा रातो विमिरा आउनुका साथै छाला दर्खराउछ र कुनैबेला घाउ नै हुन्छ । तसर्थ दाही फालेपछि छालालाई…